Nezvedu - NEW COLOR BEAUTY CO., LIMITED
Mutsva Ruvara Runako Co., Zvishoma
inonyanya kuvimbika nyanzvi kambani yeGel Polish muChina.
Kubva 2010, isu tiri kuita mukutsvagisa, kusimudzira, kugadzira, kutengesa uye basa rechakakomba chepamusoro UV Gel ChiPolish zvigadzirwa.
Yedu gel zvigadzirwa zvinosanganisira: Matanho matatu gel, Nhanho mbiri gel, Nhanho imwe gel, Pamusoro & Base bhachi, Builder gel, Polygel, Simbisa gel,
Kupenda gel, Yakachena ruvara gel, Platinum gel, Chinjana gel,
Embossing Gel uye zvichingodaro. Kune anopfuura anopfuura 2000 mavara uye needu R & D timu kushanda nesimba,
mamwe mavara uye gel ari kubatana
Kutenda kwedu "Girini & Hutano, Yakanaka Hunhu, Fashoni, Kuzvidavirira, Inodhura Mutengo, Chekutanga-chiyero Service". Kutungamira kukura kwakanaka kweiyi indasitiri, isu tinosimbisa zvakajeka kuenda kunzira yezvakatipoteredza, zvine hushamwari uye zvine hutano gel polish vagadziri.Zvese zvigadzirwa zvedu zvinogamuchirwa zvitupa zveSGS, FDA neGMPC uye zvinosangana nemitemo yemusika yemuno mhiri kwemakungwa.
Fomura yedu iri mukuwirirana kwakanaka uye kufukidzwa, yakanaka pendi kunzwa, kugadzikana kwemavara uye inogara kwenguva refu, chero ipi kubva pazvinhu zvepasi kana pigment, haina-chepfu uye haina kukuvadza, ese ari gumi zvigadzirwa zvisina mahara uye zvinongogadzirwa mushure me - zvirimwa murabhoritari vashandi vakazviongorora. zvinhu. Kuti uve nechokwadi chese gel polish mukudzikama mhando yakanaka, isu tine yakaoma kwazvo yekugadzira maitiro, zvigadzirwa zvemberi zvekugadzira, QC kuongorora maitiro, mahunyanzvi & vashandi vepamusoro vakadzidziswa.
Kuti tibate fashoni yemaitiro uye nekutsigira yemaitiro brand brand kuenderera mberi, isu tine rakakosha timu kukudziridza fomula nyowani uye mivara mitsva gore rega, kutsigira mutengi nemhando dzakasiyana-siyana dzakagadziriswa kurongedza, kusanganisira yakadhindwa bhodhoro, yakazvimirira chitambi uye mavara mabhokisi. mufekitori, tinopa hukuru hukuru uye nekukurumidza kutungamira nguva.
Kugamuchirwa kuti utaure nesu, isu tinotarisira kupfuurira mberi newe pamwe chete pane gel polish indasitiri nekuhwina-kuhwina mamiriro!